« Peace Center ee Radio Okerwelle: Siyaasadda Refugee …
Animation: Shan xaqiiqada ka dhanka ah nacayb qaxootiga … »
Mar labaad iyo mar kale ayaan ka ugub ah: in idaacadaha, oo heeso badan aan, laakiin horyaalka ah, waxaa jira weydiimo joogto ah.
Xisbi Kenya Ayub Ogada ahaa busker ku Line Northern, markii uu helay dareenka ku haboon in 80s soo daahay oo ay World Real. Iyada oo qabanqaabo ay fudud disarmingly wuxuu ka dhigay 1993 Samee aragti waarta. Fudayd virtuosic ku ah qalab Bariga Afrika – Lyra loo yaqaan nyatiti ah – Ayub jilaa badan ee soo jiidashada iyo cod diiran mar kale xarunta muusikada ahaa. Waxa uu tusay Africa oo dhan dareenkooda ay…
Halkan waa hoostana aad:
This entry was posted on Saturday, August 22-, 2015 at 14:37 by Hans Kottke oo la soo gudbiyay hoos 2015, General, Art. Waxaad raaci kartaa jawaabaha wax to this entry marayo RSS 2.0 feed. Waxaad awoodi kartaa ka tago jawaab, ama trackback ka your site u gaar ah.
Wed Jul 17th 14:32:37 UTC 2019